Deshko Media, Author at Deshko News - Page3of 217 Deshko News Deshko Media, Author at Deshko News - Page3of 217
प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री राईले गरे ठूलो षडयन्त्रको पर्दाफास ! विदेशी शक्तिको पनि संलग्नता
भोजपुर । प्रदेश नं १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले अहिले सङ्घीयतालाई कमजोर बनाउने षड्यन्त्र भइरहेको बताएका छन् । देश नयाँ संरचनामा गएपछि जनताले सुशासनको अनुभूति गर्न पाएको भए पनि स्वदेशी
कालापानीबाट भारतीय सेना लखेट्न भीम रावलले लिए कडा एक्सन, ओलीले मान्लान ?
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका प्रभावशाली नेता भीमबहादुर रावलले कालापानीबाट भारतीय सेना हटाउन सरकारलाई उपयासहितको सुझाव दिएका छन् । प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकको विशेष समयमा बोल्दै रावलले सेना फिर्ता पठाउनका लागि
यी हुन नेकपाका हिम्मतिला सांसद, प्रधानमन्त्रीलाई काउन्टर दिँदै संसदमै राखे यस्तो माग
नेकपाकै सांसद प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतीय प्रणालीकाे पक्षमा काठमाडौं । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का सांसद शेरबहादुर तामाङले शासकीय स्वरुप परिवर्तन गरेर अगाडि बढ्नाको कुनै विकल्प नभएको बताएका छन्
‘भ्रष्टाचारको आरोपमा गगन थापामाथि छानविनको माग’
काठमाडौं । अनेरास्ववियुका अध्यक्ष ऐर महरले प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका युवा नेता एवं पूर्वमन्त्री गगनकुमार थापामाथि भ्रष्टाचारको आरोप लागेकाले छानविन हुनुपर्ने माग गरेका छन् । गगन थापामाथि बाख्रा काण्ड, १४
काठमाडौं । भ्रष्टाचारको आरोप लागेका नेताको पक्षमा संसद अवरुद्ध गर्ने नेपाली कांग्रेसलाई नैतिक पाठ सिकाउँदै सत्तारुढ नेकपाले निवर्तमान सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटामाथि अनुसन्धान अघि बढाएको छ । करोडौं कमिसन मागेर अनियमितताको
उपप्रम पोखरेलले कालापानी क्षेत्रको भ्रमण गरेपछि दार्चुलामा खुसियाली, सुरक्षाकर्मी खटाउने तयारी
काठमाडौं । उपप्रधान तथा रक्षमन्त्री ईश्वर पोखरेलले दार्चुलास्थित कालापानी क्षेत्रको भ्रमण गरेपछि दार्चुलामा खुसियाली तथा आशा पलाएको छ । खासगरी उपप्रधानमन्त्रीको भ्रमणले तिंकर सडक निर्माण नेपाली सेनाले निर्मँण गर्ने तथा
डा. प्रिन्स रौनियार हुवे प्रान्तभरिबाट वुहानका वुवादामा जम्मा भएका १८१ जना भेला भएपछि इमिग्रेसनसम्मको ५ वटा स्वास्थ परीक्षण पार गरेर १ सय ७५ जना नेपालबाट आएको विमान चढ्न वेटिङ रुमसम्म
भ्रष्टाचारी अभियुक्त विजय गच्छदारलाई पक्राउ गर्ने तयारी
काठमाडौं । बालुवाटारको ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा मुछिएका पूर्वउपप्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विजयकुमार गच्छदारलाई पक्राउ गर्ने तयारी गरिएको छ । उनीविरुद्ध नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)मा ठगी
दार्चुला । उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले भारतीय सेनाकाे कब्जामा रहेकाे दार्चुलाको कालापानी क्षेत्रको भ्रमण गर्ने भएका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदमा सम्बोधन गरेर नक्सा सच्याउने मात्र होइन भूमि नै
दुःखमा नेपालको साथ पाएपछि चीन नतमस्तक, भावुक हुँदै राजदूतले के भनिन् ?
काठमाडौं । कोरोना भाइरसको संक्रमणसँग लडिरहेको चीनले नेपालको साथ र सहयोगको प्रशंसा गरेको छ । खासगरी नेपाली नागरिकबाट सदभाव र शुभेच्छा देखेपछि चिनियाँ राजदूत भावकु नै बनिन् । चीनलाई सान्त्वना